Ntuziaka onye na-azụ ihe traktọ (Nkebi nke 2 - Kubota) - Magazin Sistemu Nduku
Ntuziaka ndị na-azụta traktọ (Nkebi nke 2 - Kubota)
Ihe ịma aka ndị na-eche ọrụ ugbo na-adịwanye ibu ma na-agbagwoju anya. Iji dozie ha, ị chọrọ karịa traktọ ọhụrụ; ị chọrọ onye mmekọ ga-enyere gị aka ime mkpebi mara mma. Ọ kwesịrị ịdị irè karị, ntụkwasị obi, nye atụmatụ dị ukwuu na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya. Na-enye arụmọrụ na-adịghị emebi emebi, ike pụtara ìhè na nrụpụta mmanụ ọkụ, Kubota's M-Series traktọ ugbo na mmejuputa oke bụ ọkwa ụwa.
Kubota enwetala aha siri ike maka teknụzụ dị elu, ihe ọhụrụ, ntụkwasị obi na ọrụ magburu onwe ya.
Kubota's M Series na-ejikọta oke ike yana oriri mmanụ dị ala yana teknụzụ nwere ọgụgụ isi dị elu. Ihe si na ya pụta: arụmọrụ dị elu na ntụgharị maka ọrụ ọ bụla n'ọhịa ma ọ bụ n'ugbo.
Site na kọmpat Kubota M4002 utility traktọ ruo M7002 na-eduzi klaasị nwere ike pụrụ iche, teknụzụ ọhụrụ na injin Stage V - M Series, ụlọ ọrụ ahụ na-enye traktọ dị iche iche (66-170 hp) iji gboo mkpa nke taa na-adigide na oru ugbo bara uru..
Kwadoro site na injin sịlịnda anọ 6108L V6,1 n'okpuru mkpuchi oroma na-egbuke egbuke. Iji rube isi na ikpeazụ Tier 4, ụlọ ọrụ ahụ mere ogologo oge: etinyere ihe nzacha na-agafe agafe n'okpuru mkpuchi, ihe ntụgharị SCR catalytic nwere modul injection eAdBlue n'okpuru iyuzucha.
Axle Dana na-eju mmiri, nke siri ike na-enye aka na nkasi obi ịnya ụgbọ ala. Ọ na-eji ogologo ogwe aka na-ada azụ azụ ma si otú a na-enye nkasi obi nkwusioru. Nkwụsị ahụ nwere ike ịrụ ọrụ na-akpaghị aka dabere na ọnọdụ ahụ, ma ọ bụ ọ nwere ike kwụgidere n'ọnọdụ kacha ala ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ na onye na-ebu n'ihu.
Banyere hydraulics, M7171 emelitere nke ọma. Enwere nkeji njikwa isii kachasị n'azụ.
Jiri traktọ na ihe ọkụkụ nduku si Standen Pearson SP were kụọ poteto. Were combs abụọ nke 90 centimeters. Usoro a na-eto eto na-enye onye na-eto eto nnukwu tuber nduku.
Ụlọ ọrụ ahụ na-enye traktọ M7 ọgbọ nke atọ
Kubota (UK) Ltd webatara usoro traktọ M7003 na ahịa UK. Ugbu a n'ọgbọ nke atọ ya, ụdị M7 kachasị ọhụrụ na-ezute ụkpụrụ ikuku ikuku nke EU Stage V wee jikọta mmezi ndị ọzọ yana arụmarụ ọrụ yana ịbawanye mma ndị ọrụ.
"Njirimara ọhụrụ n'ofe ahịrị ahụ gụnyere Xpress malitegharịa, njikwa ọsọ ọsọ ọtụtụ, ngwugwu ọkụ ọkụ LED dị elu na njikwa mmejuputa traktọ (TIM)," Luke Sellwood na-akọwa, Kubota Agricultural Product Manager. "Onye na-azụ ahịa M7003 nwekwara ohere ịnweta nhọrọ ndị ọzọ."
Usoro M7003 na-enye ụdị atọ - M7133, M7153 na M7173. Mpụta ike nke igwe cylinder anọ na-agbanwe agbanwe na 130 hp, 150 hp. na 170 hp n'otu n'otu, na mmụba nke 20 hp. na ụdị abụọ na-adịchaghị ike na 5 hp. na ọkọlọtọ M7173.
Nkọwa nke injin edegharịrị na-enye oke ike site na 1800 ruo 2100 rpm yana ọkwa torque mgbe niile site na 1200 ruo 1600 rpm. A na-enweta ike zuru oke na 1900 rpm na oke ike ruru na 1500 rpm.
A na-enweta nnabata na ụkpụrụ ikuku ikuku nke EU Stage V site na nchikota nke nzacha mmanụ dizel dị elu (DPF) na mbelata catalytic (SCR), nke na-ewepụ EGR dị ala. Ogologo oge nhicha DPF agbagoro okpukpu abụọ site na awa 3000 ruo awa 6000, na-enyere aka ibelata ụgwọ ọrụ.
Nhọrọ mbufe ka na-agụnye KVT na-agbanwe agbanwe na nnyefe ike na-eji ọsọ mgbanwe isii n'ogo ise mekọrọ ọnụ. Mgbasa ike ugbu a nwere atụmatụ ndị ọzọ maka mmepe nke Xpress malitegharịa.
Ụdị niile nwere ugbu a nwere ntugharị ọsọ dị iche iche. Mmepe ọhụrụ a na-enye onye ọrụ ohere ịhọrọ nhazi nhazi dịka ọsọ ọsọ na ngwa ngwa si dị, dịka ọmụmaatụ na-enyekwu nkasi obi na ịdị mma mgbe ị na-agbanye isi.
"Ọkọlọtọ gia ruru bụ mkpọchi-na-mkpọchi anọ," Maazị Sellwood na-ekwu. "Site na Multispeed, onye ọrụ nwere ike ịhọrọ ibelata ọnụọgụ mgbanwe achọrọ site na 20%, 40% ma ọ bụ 60%."
Na ntọala ya kachasị ọsọ, Multispeed na-enweta mkpọchi zuru oke na naanị 1,5 tụgharịa na 2,4 tụgharịa azụ. Maka ihe nchekwa, a na-agbanyụ sistemụ ahụ na-akpaghị aka na ọsọ ọsọ nke 18 km / h (12 km / h n'azụ) ma megharịa ya mgbe ọsọ ahụ dara n'okpuru ebe a, ya bụ, ịkwọ ụgbọala na-ebelata. Usoro a na-enwe nkwarụ kpamkpam mgbe ọsọ n'ihu ruru 25 km / h (20 km / h reverse) na enwere ike ịmegharị ya mgbe traktọ na-ebelata ma Multispeed selector switch dị n'ọnọdụ dị iche.
Tags: nhọrọ traktọnjirimara teknụzụ nke traktọtraktọ
Njikọ nke Roscrahmalpatoka sonyere na International Federation of Starch Associations (IFSA)
Obere nduku na-ebili na ọnụahịa na ahịa Poland